लकडाउन अवधीमा काेराेना बाट मर्ने भन्दा आत्महत्या गर्ने बढी : कर्णालीमा मात्रै ५८ जनाले आत्महत्या गरे
छिटो खबर २०७७ जेठ २७ गते मंगलबार १६:१८:१४ मा प्रकाशित
कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका बेला ठूलो संख्याले आफ्नै हत्या गरेका छन् । नेपाल प्रहरी प्रवक्ता डिआईजी निरजबहादुर शाहीका अनुसार, लकडाउन सुरु भएको ११ चैतदेखि १७ जेठसम्मको अवधिमा एक हजार एक सय पाँच जनाले आत्महत्या गरेको तथ्यांक छ ।
यो अवधिमा कोरोनाबाट जम्मा ६ जनाको मृत्यु भएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार सोमबारसम्म कोभिड– १९ बाट देशभरि १४ जनाको ज्यान गएको छ ।
लकडाउनको अवधिमा देशभर दैनिक १६ जनाभन्दा बढीले आत्महत्या गरेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ । ११ चैतदेखि १० जेठसम्म कुल नौ सय ६३ जनाले आत्महत्या गरेकोमा त्यसपछिको एक हप्तामा एक सय ४२ जना अर्थात् दैनिक २० जनाले आत्महत्या गरेको देखिन्छ ।
वागमती प्रदेशमा लकडाउन सुरु भएयताको ६९ दिनमा दुई सय ३१ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । यीमध्ये ६९ जना काठमाडौं उपत्यकाका छन् । यस हिसाबले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा औसतमा दैनिक एकजनाले आत्महत्या गरेको देखिन्छ ।
प्रदेश–५ मा दुई सय ४२ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । प्रदेशगत हिसाबले यो सबभन्दा धेरै हो । यो प्रदेशमा सबभन्दा बढी ३८ हजार पाँच सय ८७ जना क्वारेन्टिनमा छन् ।
संक्रमणको हिसाबले प्रदेश–५ दोस्रो बढी कोरोना प्रभावित प्रदेश हो । सोमबार साँझसम्म यो प्रदेशमा एक हजार एक सय ७६ संक्रमित छन् । कोरोनाबाट प्रदेश–५ मा चार जनाको ज्यान गएको छ ।
११ चैत यताको ६९ दिनमा प्रदेश–१ मा एक सय ८६, प्रदेश– २ मा एक सय ५२, गण्डकीमा एक सय २१, कर्णालीमा ५८ र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा एक सय १५ जनाले आत्महत्या गरेको डिजाइजी शाही बताउँछन् ।
भनिन्छ, मान्छेले संसारमा सबभन्दा बढी माया आफैँलाई गर्छ । त्यसो भए आफूले सबभन्दा बढी माया गर्नेकै हत्या किन गर्छ त, मान्छे ?
मनोविश्लेषकहरू आत्माहत्यालाई सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र जैविक कारणहरूको उपज मान्छन् । उनीहरूका अनुसार, आत्महत्या गर्नेहरूमध्ये अधिकांशमा कुनै न कुनै रुपमा मानसिक रोग हुन्छ । सबै मानसिक रोगीले आत्महत्या गर्छन् भन्ने चाहिँ होइन ।
‘जिउनभन्दा आफैँलाई मार्न सहज लागेपछि मान्छे आत्महत्या जस्तो गलत बाटो रोज्न पुग्छ’, मनोविश्लेषक वासु आचार्य भन्छन्, ‘यसमा डिप्रेसन, सिजोफ्रेनिया, भ्रम, तनाव, व्यक्तित्व विकार, डर, अल्कोहलमा निर्भरता, जटिल दीर्घरोग आदिको भूमिका हुन्छ ।’
डब्ल्यूएचओका अनुसार भारतमा प्रतिएक लाखमा १८.५ जनाले आत्महत्या गर्छन् । नेपालको अवस्था हेर्दा प्रतिएक लाख ११.४ जना छ ।
डब्ल्यूएचओको अध्ययनमा समेटिएका एक सय ८३ देशमध्ये आत्महत्या हुने देशको ८१ औं स्थानमा नेपाल छ । लकडाउन सुरु भएयता भने पाँच सय ७१ पुरुष, तीन सय ९६ महिला, ५२ बालक र ८६ बालिकाले आत्महत्या गरिसकेका छन् । कोभिड– १९ का बेला स–सानो कुरामा पनि आत्महत्या रोज्ने प्रवृत्ति देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
‘कोरोना विश्वभरि नै छ, त्यसकारण यो समस्या मेरो व्यक्तिगत समस्या हो भन्ने कुरा मनबाट निकालिदिनुस्’ मनोविश्लेषक आचार्य भन्छन्, ‘विगतका संकट हेर्दा कोरोनाले पनि भविष्यमा थुप्रै अवसर ल्याउँछ र ममा प्रत्येक समस्याको डटेर सामना गर्ने सामथ्र्य छ भन्ने कुरा कहिल्यै नर्बिसिनुस् ।’
रक्षाबन्धनमा ब्राह्मण बाट डोरि किन बाधिन्छ ? धेरै लाई थाह छैन ।
अभिनेत्री सम्राज्ञी र निर्माता भुवनबिच दोहोरि
भोकबाट बच्न एक भारतियले सडकमा मरेकाे कुकुर खाइरहेको त्यो दृश्य